Seye fekitori yehunyanzvi yepasi nemadziro, DEGE Indasitiri Inc inogona kupa zviuru zvepasi nemadziro dhizaini kusangana nezvinodiwa zvemisika dzakasiyana siyana pasirese. Inopawo masevhisi eOEM, akadai sekunamatira vatengi 'zviratidzo uye zvigadzirwa pamakatoni uye Iko kuseri kwepasi kana madziro mapaneru.
Brand Agent Kutsigira
Semunhu anoburitsa kunze kwenyika pasi nemadziro, kutsigira vatengi kuvhura misika ibasa rakakosha. DEGE inopa emahara emusika ekuvandudza maturusi evamaki vamiririri, senge hanzu mbatya uye mabhegi, katalog, ratidza racks, sampuli, brand kurongedza, ekuisa maturusi, nezvimwe.
Kusvika ikozvino, pasi redu uye zvinhu zvemadziro zvakatumirwa kune nyika dzinopfuura makumi matanhatu nematunhu, saka isu tinoziva nemisika dzakasiyana uye zvigadzirwa. Kuti ndigone kupa vatengi nekukurumidza uye nyore kutakura masevhisi, ini ndinopa imwechete-yekumisa yekufambisa sevhisi mhinduro.
Kambani yedu ine nhoroondo refu yekudyidzana nemakambani makuru epasi rose ekutakura nekutakura. Isu tichasarudza yakakodzera kambani yekufambisa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, kuitira kuti vatengi vagone kunakidzwa nemasevhisi ekufambisa.
Sevanyanzvi pasis uye madziros zvekushongedza zvinhu mutengesi, isu tine anopfuura makore gumi ekuziva kunze kwenyika uye tinonzwisisa zvizere misika yakasiyana. Tinogona kupa zvinotevera zvitupa zvevatengi clearance, senge zvibvumirano, kurongedza rondedzero, mavovho, zvikwereti zvekutakura, zvitupa zvekubva (FOME A, FOMU E, FOMU B, FOMU P, ​​FOMU F, FOMU N, FTA), Chitupa cheFumigation , Chitupa chePhytosanitary, Embassy chitupa, FSC, CE, Soncap zvichingodaro.